Heerarkii ay soo martay Qabanqaabada iyo qabashada Doorashada Xildhibaanada (Somaliland) ee Aqalka Sare. | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Heerarkii ay soo martay Qabanqaabada iyo qabashada Doorashada Xildhibaanada (Somaliland) ee Aqalka Sare.
MUQDISHO (SONNA)- Dib u habeyntii guddiga Doorashooyinka keddib waxaa soo if-baxay khilaaf xooggan oo u dhexeeyay dhinacyadii Guddiga Doorashooyinka oo u muuqday kuwo u kala jabsan laba garab oo kala taabacsanaa Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed iyo Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi oo isku mari la’aa qaabka ay noqonayso doorashada xubnaha gobolada woqooyi ee aqalka sare maaddaama Doorashadooda la guda galayay xiligaa.
Ra’iisul Wasaaraha dalka oo ka duulaya xaqiijinta hufnaanta Doorashooyinka ayaa bilaabay kulamo uu la kala qaato labada dhinac oo is marin waa’ adag uu ka dhex jiray.
Kulamada dhinacyada ay khuseysay doorashada Gobolada woqooyi ayaa bilowday 24kii Maajo, xiligaa oo kulan albaabada u xiran yahay uu dhex maray Wasiirka Koobaad ee Xukuumadda iyo Guddoomiye Cabdi Xaashi, waxaa xigay kullan uu la yeeshay Ra’iisul wasaaraha ku xigeenkiisa Mahdi Guuleed.
Kulamadaas ayaa waxaa laga gaaray is af-garad wanaagsan, Iyadoo RW Eng. Rooble uu labada dhinac ku qanciyay in ay faraha kala baxaan Guddiga Doorashada.
Kullamada loogu kala dab-qaadayay dhinacyada is khilaafsan ayaa is daba socday ilaa laga soo gaaray Bilowgii Bishii August, xiligaa oo uu Rooble uu xafiiskiisa isugu yeeray Guddigii qaban lahaa doorashada Gobolada woqooyi oo khilaafkoodu uu gaaray heer ay doortaan guddoomiye aanay isku waafaqsanayn.
Maxamed Xuseen Rooble ayaa Guddiga la kulmay saddexdii bishii August waxa uu na kala hadlay in aanay saamaynin Siyaasadda dhinacyada soo kala xulay, balse ay u diyaar garoobaan qabashada Doorasho la isku waafaqsan yahay oo ay ku qancaan Bulshada Woqooyi oo idil.
Waxaa la mideeyay Guddigii Doorashooyinka Gobolada Woqooyi, waxa ayna doorteen hogaan ay ku qanacsan yihiin taa oo sahli kartay qabashada doorashada Gobolada Woqooyi, taa baddalkeed se Xafiiska Ra’iisul wasaaraha ayaa ka shaqeeyay sidii ay isugu imaan lahaayeen dhinacyada Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi si loo gaaro heshiis loo dhan yahay oo sahla qabashada doorasho lagu qanacsan yahay.
7dii bishan aynu ku jirno ayaa waxaa Muqdisho lagu qabtay Heshiis ay wada gaareen Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed iyo Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi waxa ayna ku heshiiyeen in ay dhinac iska dhigaan khilaafkii haraadinayay doorashooyinkooda.
Eng. Maxamed Xuseen Rooble oo ka qeyb galay xafladdii is-cafinta siyaasiyiinta Somaliland ayaa bogaadiyay tanaasulaadkii ay labada dhinac muujiyeen waxa uu na sheegay in loo dhaqaaqay qabashada Doorashada Gobolada Woqooyi.
Maalmo keddib, sidii ay ballantu aheyd Ra’iisul Wasaaraha dalka ayaa loo gudbiyay Liiska Musharixiinta Aqalka sare, waxaana sawir ka soo wada muuqday 21kii bishan Rooble oo dhaxda uga jira Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi, dhinacyaduna ay wada faraxsan yihiin.
Wax ka yar Laba Toddobaad ayey ku suuragashay in la diiwaan geliyo Musharixiinta, la xareeyo Ergada Dooranaysa, la tababaro keddibna ay doortaan Xubnaha Aqalka sare ee matalaya gobolada Woqooyi.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa shalay khudbad uu kula dardaarmayay guddiga doorashada iyo ergada wax dooranaysa oo ku sugnaa hoolka doorashada ay ka dhacayso ayaa hadalkiisa waxaa ka mid ahaa:- “Odayaasha waxaan iyagana leeyahay, waad ku mahadsan tihiin dadaalkiina, kartidiina, waxaan idin ka rabaa Caddaalad, dhamaanteen Caddaaladaa na deeqdo. Maantay Soomaali kaliya idin ma eegaysee Alle SWT ayaa idin eegaya, marka waxaan idin leeyahay Caawa qofka hoyanaya oo aakhiro xageed u hoyanaya lama ogee, Caddaalad ayaa la idin ka rabaa”.
Maanta ayey soo gaba-gabowday doorashadii Xildhibaanada Gobolada Woqooyi ee ka mid noqonaya Aqalka sare, waxaana ay noqontay doorasho la wada amaanay, sidaana waxaa gaba-gabo ku dhow dhamaystirka doorashada Aqalka Sare.
Sidoo kale, Rooble ayaa faray Maamul goboleedyada kale ee dalka in ay soo dhamaystiraan sideedda Kursi ee ku kala dhiman si loo guda galo doorashada Xildhibaanada Gollaha Shacabka BFS.
Halkan ka aqriso 11 Xildhibaan ee Gobolada Woqooyi ay ku yeelanayaan Aqalka sare ee Soomaaliya.
Prof. Cabdi Ismaaciil Samatar
Layla Axmed Ismaaciil
Bilaal idiris Cabdullaahi
Previous articleWasiirka Maaliyadda XFS oo kulan kula qaatay Aaladda Foggaan arag qaar kamid ah Wasiirada Maaliyadda Afrika “SAWIRRO”
Next articleQaramada Midoobay oo ka walaacsan go’aanka Itoobiya ee lagu ceyriyay 7-sarkaal